Governemanta : Tsy mahefa mamaritra ny datim-pifidianana -
AccueilRaharaham-pirenenaGovernemanta : Tsy mahefa mamaritra ny datim-pifidianana
Governemanta : Tsy mahefa mamaritra ny datim-pifidianana
22/06/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nampiantso ny mpanao gazety indray ny praiminisitra lehiben’ ny governemanta omaly, nanotrona tamin’ izany ny filohan’ny voamiera mahaleo tena misahana ny fifidianana sy ny minisitry ny Vola. Nandritra ny valandresaka izay notanterahin’ny praiministra dia mbola tsy nisy ny daty mazava izay mety hanatanterahana ny fifidianana, na dia efa nisy aza ny tolo-kevitra amin’ny CENI. Nandritra ny valandresaka ihany koa anefa dia tsy nahazo anjara fitenenana ny filohan’ity rafitra mpikarakara fifidianana ity nandritra ny fihaonana. Nisisika mafy rahateo anefa ny mpanao gazety nanontany ny amin’ ny mety hisian’ny fifidianana amin’ ity taona ity na tsia. Ny valiteny nomen’ ny praiminisitra Ntsay Christian dia ny hoe “efa misy ny fihaonana sy ny fiaraha-miasan’ ny governemanta sy ny CENI, ahafahana mandray soso-kevitra sy ny fanomanana ny fifidianana malalaka sy eke’nny rehetra ‘’ hoy ny praiminisitra. Raha namerina nanontany anefa ireo mpanao gazety mikasika ny tena asa tanterahina marina dia valiteny tsotra sy tokana no azo avy amin’ ny praiminisitra, dia ny hoe “miroso isika amin’ ny fifampidinihana amin’izay lalan’ny fifidianana izay’’.
Mikasika ny didin’ ny HCC ny amin’ ny tokony hanatanterahana ny fifidianana alohan’ny fotoana kosa dia nanambara ny praiminisitra fa ‘’ laharam-pahamehana ny fifidianana araka ny lalàm-panorenana, ary teo ihany koa ny fanapahan’ ny HCC ny faha- 25 ny volana mey lasa teo. Miroso amin’ izay fijerena ny amin’ny tokony hatao isika. Tsy maintsy jerena ny lafiny ara-bola sy ny fandriam-pahalemana’’ hoy hatrany ny praiminisitra Ntsay Christian. Rehefa tsy nahazo valiteny mahafa-po tamin’ny fanontaniana moa ny mpanao gazety na dia niezaka namerina nanontany dia taitra ihany tamin’ ny filazan’ny praiminisitra fa “ tsara ny mitondra fanazavana satria maro ny miteny fa tsy miroso isika amin’ny fikarakarana ny fifidianana”. Hatreto noho izany dia mbola tsy mazava noho izany ho mety andro hanatanterahana ny fifidianana, satria na dia ny praiminisitra aza tsapa ihany tamin’ny valiteniny fa tsy dia mitombina loatra amin’ izay famaliana ny resaka datim-pifidianana izay. Tsapa ihany koa fa tsy dia tena governemantan’ny fampiraisana ny governemanta misy, fa samy manatratra ny tanjony avy ny tsirairay. Izay rahateo ny sary nivoaka tamin’ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety omaly.
Fijoroan’ny « Haute Cour de Justice » : Ny mpanongam-panjakana no hotsaraina voalohany
Andry Rajoelina sy ny forongony no hotsarain’ny Haute Cour de Justice voalohany. Satria nahoana: izy no Filoham-panjakana velon’aina tra-tehaka tamina fanonganam-panjakana tamin’ny 2009, ka nahafatesana malagasy maro sy naharavana fananan’olona marobe ary nitarika izao fahantran’i ...Tohiny